MYU SHADAN: သီးခြား ကချင်နိုင်ငံတည်ထောင်ရန် KNO ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
“KNO ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ကို ကျနော်တို့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်လာချိန် တခါတလေစိတ်ကူးထားတာနဲ့ လွှဲလာတာရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် မလွှဲဖို့ရန်အတွက် အမြဲတမ်းသတိရစေဖို့ ဆွေးနွေးတယ်။ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ပြီးတော့ သဘောထား ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်” ဟု KNO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒူဝါ မခေါခွန်ဆာ KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
၎င်းကြေညာချက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အချာအာဏာနှင့်ပြည့်စုံသော သီးခြားလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီး ထိုနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကျင့်သုံးသွားမည်ဟု ဆိုထားသည်။
သို့သော် ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ မွန်နှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးပါဝင်ပြီး စစ်မှန်သောဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်သွားမည်ဆိုပါက KNO အနေဖြင့် ပါဝင် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မေလ ၂၈ ယမန်နေ့ မြန်မာအစိုးရနှင့် KIO ကြား ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်း မဂျွယ်ခန်းမ ဆောင်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေချိန် KNO ဗဟိုအစည်းအဝေးမှ ယခုလို ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
KNO နှင့် KIO သည် “ကချင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး” အတွက် အတူပူးပေါင်းရန် ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက်က သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
Posted by myu shadan at 9:29 PM
Tsaw ra ai KIO/ KIA ginjaw salang ni hpang de
ကချင်-တရုပ် နယ်ခြား မှတ်တိုင်အမှတ်(၆) ပန်ဝါဒေသ ရှိ...
Window 8 professional 64 bit ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လားရှိုးမှ မီးရှို့ခံရသည့် အမျိုးသမီး အသက် စိုးရိမ်စ...
KIA,ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နှင့် တွေ...
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော် (KBC) မှ အထွေထွေအတ...
စစ်တိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက် Arma Tactics THD စစ်တို...
တအိမ်ထောင် ကလေး ၂ ယောက် အမိန့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
KABU MARAWN LE HKAP TAU
Thousands of Myitkyina residents welcome KIO deleg...
ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဝါသနာပါသူများအတွက် Camera FV-5
Android ဖုန်းများအတွက် Magic Toucher
PC အတွက် Viber Video
Message Box For iPhone
ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အလွန်နီးလျက်နှင့် ကမ္ဘာမခြားစေနှင...
KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ကန်ပိုင်တီလမ်း တွင် အစိုးရစစ်...
KIO ၏ လ၀ကသင်တန်း လိုင်ဇာမြို့တွင် ပြန်ဖွင့်
ဦးသိန်းစိန်ကို အမေရိကန်မှာ ဆန္ဒပြမည်
Whizzo Myanmar Typing Tutor
Tara Myanmar - English - Thai - Japan - Koria - Ru...
Wunpawng myu sha ni mung dan lu ging sai i ?
ဖိုင်ဖြည်သည့် Program များ စုစည်းမှု့
Google Chrome v25.0.1364.172 (Offline)
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ကျပ်ငွေသန်း ...